Manchester United oo heshiis shan sanadood ah hordhigaysa Weeraryahan ka tirsan Kooxda AC Milan – Gool FM
(Manchester) 29 Okt 2020. Kooxda kubadda cagta Manchester United ayaa la soo warianyaa inay isku diyaarinayso inay heshiis shan sanadood ah hordhigto Weeraryahan ka tirsan Kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga.
Waxaa la warinayaa in Manchester United ay isku diyaarinayso inay dalab u bandhigto Weeraryahaka Kooxda AC Milan ee Hakan Calhanoglu, waxaana warbixinta lagu sheegay inay doonayso inay heshiis shan sanadood ah hordhigto xiddigan si ay ugu soo dhaqaajiso garoonka Old Trafford.
26-sano jirkaaan ayaa qaab ciyaareed wanaagsan siinaya AC Milan inta lagu guda jiro kal ciyaareedkan 2020-21, waxaana uu dhaliyey afar gool isagoo caawiye ka ahaa afar gool oo kale siddeed kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan.
Xiddigan xulka qaranka Turkiga ayaa heshiiskiisa haatan waxa uu ku eg yahay bisha June ee soo aaddan, Jariiradda Gazzetta dello Sport ayaana warinaysa in Man United ay xiiseynayso inay u soo dhaqaajiso horyaalka Premier League.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in Macallin Ole Gunnar Solskjaer uu isku diyaarinayo inuu soo qaato weeraryahankan oo uu hordhigo heshiis shan sanadood ah, laakiin Milan ayaa weli ku rajo weyn inay heshiis cusub la gaarto laacibkan ka hor dhammaadka sanadka 2020.
Calhanoglu ayaa garoonka San Siro uga soo dhaqaaqay dhanka kooxda Bayer Leverkusen sanadkii 2017, waxaana uu naadiga reer Talyaani u saftay 137 tartammada oo dhan, isagoo u dhaliyey 27 gool, isla markaana u sameeyey 40 caawin.
Tiro ka mid ah kooxaha dalka Spain ka dhisan ayaa sidoo kale la rumeysan yahay inay il gaar ah ku hayaan horumarka uu sameynayo Weeraryahankan.